तरकारी खेतीबाट चेपाङको जीवनस्तर फेरिदै ! – Saurahaonline.com
तरकारी खेतीबाट चेपाङको जीवनस्तर फेरिदै !
राप्ती,१३ कात्तिक । पुर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका वाड न ११ मा अधिकाश चेपाङ समुदायका मानिसहरुको बसोबास छ । गिठा, भ्याकुर, सिस्नो र टाँकी खाएर जीविकोपार्जन गर्ने चेपाङ समुदायका मानिसहरु अहिले खेतीपातीमै व्यस्त हुने गर्छन ।चेपाङ खेतीपातीको काममा संलग्न हुन थालेपछि उनीहरूको दैनिकी परिवर्तन भएको हो ।
स्थानिय अमर चेपाङ केहि वर्षदेखि तरकारी र सुन्तला बिक्री गर्दै आएको बताए । चैतमा लगाएको मकै भदौमा पाक्छ, असारमा मकैबारीभित्रै काउली, गोलभेडा लगाउँछु,” उनले भने, “पहिला बाँच्नका लागि दुःख गर्यौ, अहिले जीउनका लागि दुःख गर्दैछौं ।” सुन्ताला बाट चेपाङ समुदायका अधिकाशले राम्रो आयआर्जन गरिरहेका छन । त्यहाँका स्थानिय बालबालिकाहरु कोहि नयाँ पाहुना आउदा अम्बा, अमला , सुन्ताला बेच्ने गर्छन । गाउँमा राम्रो सडक बिजुली जस्ता कुनै सुविधा छैनन् । थुप्रै चेपाङहरुले अहिले तरकारी तथा फलफूल उत्पादन तथा बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्न थालेका छन् । तरकारी तथा फलफूल उत्पादन मात्र होइन यहाँका चेपाङ समुदायका मानिसहरुले बाख्रापालन, कुखुरापालन लगाएतका काम समेत गर्न गर्छन ।
खेतीको अन्नले केही महिना मात्र खान पुग्ने भएकाले बाँकी महिनाको केही समय यहाँका चेपाङले बाख्रापालन, कुखुरापालन लगाएतका काममा जोड दिने स्थानिय चेपाङ अगुवा बताउछन । तरकारी तथा फलफूल उत्पादन केहि समयका लागि हुने तर बाख्रापालन, कुखुरापालन नियमित गर्न सकिने भएकाले चेपाङ समुदाय त्यसमा आकर्षित भएको उनको भनाई छ । सो ठाउँमा बाख्रापालन आयआर्जनको राम्रो माध्यम बनेको छ । उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य पदार्थ खुरखुरे, भण्डारा लगाएतका स्थानमा पु¥याएर बिक्री गर्ने गरेका छन् । गाँउ सम्म गाडि जादाँ सहज भएको स्थानिय बताउछन । चेपाङहरु गाडि आउने समय भन्दा आधा एक घण्टा अघि देखिकै गाडि रोकिने ठाँउमा गएर बस्ने गर्छन । कृषिमा आकर्षित चेपाङ समुदायलाइ अझ बढी सहयोगको खाँचो रहेको सो वार्डका वडा अध्यक्ष हितबहादुर तमाङले जानाकारी दिनुभयो ।
चेपाङ समुदायको विकास र दैनिकि परिर्वनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्न नगर प्रमुख प्रभा बरालले बताउनु भयो ।